कांग्रेस एमालेबीच झडप ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अर्थनीति > कांग्रेस एमालेबीच झडप !
कांग्रेस एमालेबीच झडप !
धनुषा । धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्तावीच झडप भएको छ । दूवै दलले एकअर्काले आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले नगरका मेयर पदका उम्मेदवार परमेश्वर यादवको घरमा सांघातिक आक्रमण भएको जनाएको छ । नगरपालिकाको अकौरास्थित यादवको घरमा गए राति करिब १२ बजे आक्रमण भएको हो । मेयर पदका उम्मेदवार यादवले आफूहरु सुतिरहेको अवस्थामा १०० बढीको समूहमा आएका एमाले कार्यकर्ताहरुले घरमा आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीले गस्ती गरिरहेकै अवस्थामा एमाले कार्यकर्ताहरुले आफ्नो घरमा आक्रमण गरेको यादवले बताए । मदिरा सेवन गरेर पुगेका उनीहरुले घरको मूलढोका तोडफोड समेत गरेर ढुंगामुढा गरेको यादवको भनाइ छ ।
एमाले कार्यकर्ताहरुले काँग्रेस समर्थक राजेन्द्र यादवको घरमा समेत ढुंगामुढा गरेको आरोप कांग्रेसको छ । एमाले कार्यकर्ताले गरेको आक्रमणमा परी स्थानीय देवेन्द्र यादव, विनोद यादव, रामगुलाम यादव, पुकारी देवी यादव, राजन यादव, लगायत घाइते भएका छन् ।
घटनाका सम्बन्धमा एमालेले भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राज्य आतंक मच्चाएको आरोप छ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीको निर्देशनमा कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रहरीकै संरक्षणमा एमालेका कार्यकर्तालाई घर घरमा पसेर आक्रमण गरेको एमालेको आरोप छ । एमालेका जिल्ला नेता शीतल साहले एमालेलाई मतदानको दिनसम्म घर बाहिर निस्कन नदिने भन्दै टोलटोलमा आतंक मच्चाइएको बताए ।
कांग्रेस नेता निधीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एमाले कार्यकर्तालाई घर घरमा पुगेर धम्क्याइएको आरोप एमाले केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठले लगाए । महासेठले आइतवार विज्ञप्ति जारी गरी धनुषामा राज्य आंतक सिर्जना गरिएको र असुरक्षाका कारण अनगराई नगरपालिकाका ७० भन्दा बढी एमाले कार्यकर्ता विस्थापित भएको जनाएका छन् ।
केही व्यक्तिलाई गए रातिदेखि बेपत्ता पारिएको एमालेको आरोप छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिने जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ असोज १
२०७४ असोज १ गते १५:०२ मा प्रकाशित
केएल टावरमा सुरु भयो दशैं तिहार उपहार योजना
हङकङलाई हराउँदै नेपालले जित्यो क्रिकेट उपाधि, यू–१९ एसिया कपका लागि छनौट
सुजुकीको तीन लाख वचत सहित ‘ह्याप्पी न्यू कार’ अफर !
आलमको थुनछेक वहस सुरू, कस्तो सजायको आउला आदेश ?
अरुण तेस्रो जलविद्युत्त कार्यालयमा बम विस्फोट
ग्लोबल आईएमई बैंक र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. बीच (Bancassurance) सम्झौता
१४ सय एटिएमबाट तीन घन्टामा डेढ अर्ब चोरी